Translations by Dust Kasiyapfumbi in “Shona (sn) translation of ...” : Shona (sn) : Template “ubiquity-slideshow-ubuntu” : Precise (12.04) : Translations : ubiquity-slideshow-ubuntu package : Ubuntu
Translations by Dust Kasiyapfumbi
Translations by Dust Kasiyapfumbi in ...
Dust Kasiyapfumbi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.
Tinotambira Ubuntu 11.10
Iyi Ubuntu manje ino nakidza kushandisa. Ubuntu 11.10 inokonenzvera Unity desktop interface, inova nzira itsva yekurongedza nekushandisa midziyo yepa mucheni wako.
Apa <a href="http://askubuntu.com/">Ask Ubuntu</a> ndipo pane mhinduro kumibvunzo yaungava nayo. Mhinduro dzemibvunzo yakawanda ndipo padziri uye pane vanhu vakawanda vano pindura mibvunzo yako nerufaro. Kana uri muzvina basa uchida mhinduro nekukasika unokwanisa kupiwa neCanonical pano <a href="http://www.ubuntu.com/support">commercial support</a> apa. Dzimwe nzira dzeekuwana mhinduro dziri apa <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a> muDandemutande redu.
Ubuntu ino shandisa Mozilla FireFox kupinda muDandemutande nekukasika. Uno kwanisawo kupinda muDandemutande nedzimwe nzira dzauno wana mudura remaprograms riri paUbuntu Software Centre
Ubuntu ndeye munhu wese, zvisineyi nekuti ndiwe ani uye uri kupi. Uyu ndiwo mudzi wezvatinotenda nekushuwira. Ubuntu inopa unyanzvi kumunhu wese nokuti unogona kushandura ruvara rwezvauri kuita, kana ukuru hwezvinyorwa kuti uone zvakanaka uye mutauro waunoda kushandisa.
Mabatirwo endimi dzekushandisa
Kana uine mimbunzo
Dura rako remuchadenga
Account ye <a href="https://one.ubuntu.com/services/">Ubuntu One Free</a> inokupa zvuru zvishanu (5GB) dzedura rekuchengetera zvinyorwa kana mifananidzo muchamwepo. Dura iri harasi pamucheni wako zvichireva kuti uno kwanisa kuri shandisa nemicheni yakasiyana uye hama ne shamwari vanogonawo kuisa ruoko mudura rako vachiona zvirimo. Uno kawnisa kutora mifananidzo neNharembozha yako uchibva waona mifananidzo iyoyo pamucheni wako kana kunzwa mhanzi dzako <a href="https://one.ubuntu.com/services/music/">Music Streaming</a> paunodira.
Mhanzi dzako paunodira
Ita zvaunoda nemifananidzo yako
Gara pedyo nevamwe
Ubuntu Message Indicator inharire yematsamba ose anobva kuhama neshamwari dziri kwaka siyanasiyana. Matsamba ose zvisineyi kuti abva nekupi unoaona nekukasika.
Kunobva matsamba aunga one
Twitter (kedu Dimba)
Panedzimwezve nyundo dzeunyanzvi
Dura reUbuntu Software Centre rine zvuru nezvuru zveunyanzvi hwaunga shandise pamucheni wako. Chako kunyora zvauru kutsvaga kana kupinda mumatura ezve mitambo, zvidzidzo kana unyanzvi hwe science. Inyore chaizvo kunokora zvaunoda kana kunyora mafungiro ako uchizivisawo vamwe maonero ako.